Archive de l'auteur | NewsMada | Page 982
Atallah Béatrice : “Itambarana ny fanomanana ny Frankôfônia”
Par Taratra sur 04/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
“Itambaran’ny rehetra ny fanomanan ny Frankôfônia”, hoy ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, teny Anosy, omaly, momba ny fampiantranoan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia faha-16, amin’ny volana novambra ho avy izao. Misahana ny fanomanana rehetra ny filohan’ny Repoblika, ary samy manana ny andraikiny ny minisitera tsirairay avy, araka ny fanazavany. Efa mandeha izao ny fanorenana […]
Rakotomanga Eric : “Mila fanovana ny politika ampiharin’ny mpitondra”
Mby aiza ny toe-draharaham-pirenena? Mila fanovana ny politika ampiharin’ny mpitondra, raha ny fijerin’ny AKFM. “Tsy mahamaika ny fanovana governemanta na praiminisitra. Politika iray ihany no ataon’ny governemanta amin’izao fotoana izao, izay nofaritan’ny filoham-pirenena. Koa na miova aza ny olana, nefa tsy miova ny politika: tsy iadian-kevitra be izany na anantenaina inona… “ Fanehoan-kevitry ny filoha […]
Toamasina : nandroaka mpiasa ny ben’ny Tanàna
Nandroaka mpiasa efa tranainy miisa fito be izao, ny ben’ny Tanànan’i Toamasina, Ratsiraka Elysé ka anisan’ izany ny ben’ny Tanàna teo aloha mpikambana amin’ny antoko Tim, mpikambana anivon’ny filankevitry ny Tanàna amin’ izao fotoana izao Rakotomanana Gervais. Misahana ny BMH eo anivon’ny kaominina ny tenany raha ny maha mpiasa tsotra azy. Voaroaka koa Rakotoarivelo Solofo […]
Behoririka : nakatona ny toeram-pivarotana Golden Center
Par Taratra sur 04/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nakaton’ny polisy niaraka tamin’ny vadintany ny toeram-pivarotana Golden Center eny Behoririka, omaly. Fanatanterahana didim-pitondrana monisipaly izy io, raha ny fantatra, ary tsy nisy resaka fa nanakatona ny varavarana sy namantsika izany avy hatrany. Nitangorona ny olona teo anoloan’izany, ary nitabataba ireo tompon’ny fivarotana fa mbola voahidy ao entan’izy ireo. Mitaky ny hamoahana ny entana rehetra […]
Saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahatelo eo Antaninandro teo am-panaovana ny asa ratsiny eo amin’ny fasana eny Anjanahary, ny talata teo ny jiolahy telo mpanendaka eny an-toerana. Vao nivoaka ny fonja iray volana lasa izay ny iray amin’izy ireo… Noraisim-potsiny ! Maro ny olona efa nitondra faisana tamin’ireo jiolahy mpanendaka eny amin’ny fasana eny Anjanahary […]
Maevatanana : lakana nivadika, olona 2 tsy hita popoka
Par Taratra sur 04/03/2016 Divers, NS Malagasy
Tsy mbola hita, hatramin’izao, ireo olona roa rendrika tamin’ilay lakana nivadika tany Mahalavonona Madiomirafy Maevatanana, ny herinandro teo. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, olona efatra izy ireo no nandeha lakana, saingy nivadika tampoka ny lakana noho ny rano mahery. Mitohy ny fikarohana ny razana ataon’ny zandary sy ny fokonolona any an-toerana. Voalaza fa […]
Hafari : « Tsy manao politika izahay… »
« Tsy manao politika ary tsy mpanao politika fa miara-miasa amin’ny fanjakana ny Hafari Malagasy. Amin’ny maha mpiaro ny zon’olombelona ny fikambanana, tanjona efa napetraky ny fikambanana hatramin’izay ny fiarovana amin’ny herisetra, manohitra ny tsindry hazolena, mijery ny sosialim-bahoaka », hoy ny filohan’ny tetikasa fifindra-monina ambanivohitra, Rafanomezantsoa Jean Nirina, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly […]
Par Taratra sur 04/03/2016 En Bref, NS Malagasy
Tsy mety miala mihitsy ireo mpividy volamena tsy ara-dalàna anaty fiara eo Analakely. Isan’ny mitarika ny tsy fandriampahalemana eny Analakely sy ny manodidina ny fisian’izy ireo miantsoantso eny an-toerana. Vao omaly no nisy renim-pianakaviana iray nendahin’ny mpanendaka. Mody misahotaka mitsoaka manaraka ireo mpivarotra ry zalahy kanjo manendaka. Lasa tamin’izany ny firavaka volamena teny an-tendany. Avy […]
Nitondra valin-kafatra ny tompon’ny tany… : «Tsy nisy maty voatifitra tany Anjozorobe»
Nitondra valin-kafatra avy hatrany ho an’ny Antandroy. « Tsy mitombina ny filazana fa nisy maty voatifitra tao amin’ny toeram-pitrandrahana vato. Azo hamarinina amin’ny mponina any an-toerana izany. Noforonina avokoa ireny mba ahafahana’izy ireo mijanona ao amin’io toeram-pitrandrahana io », hoy ny anisan’ny tompon’ny toeram-pitrandrahana, Rolland Robert, omaly, tetsy Andrefan’Ambohijanahary. Notsiahiviny fa efa nakaton’ny polisin’ny harena ankibon’ny tany […]
Par Taratra sur 04/03/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nirehitra i Maroantsetra, omaly ! Nodoran’ny olona ny lapan’ny Fitsarana. May potika hatramin’ny fiarakodian’ny lehiben’ny mpampanoa lalàna. Tsy vitan’izay, nirohotra teny amin’ny fonja ireo mpanao fihetsiketsehana, nitaky ny hamoahana ireo olona voarohirohy ho nanao fitsaram-bahoaka tamina famonoana dahalo iray. Kila forehitra ny fitsarana any Maroantsetra, omaly; maro ny antontan-taratasin’ady may tamin’ny birao maromaro ao an-toerana. Potika […]
Rugby : namboly hazo ny FMR sy ny ankizy
Par Taratra sur 03/03/2016 Divers, NS Malagasy
Nanatanteraka ny adidiny amin’ny fambolen-kazo ny federasiona malagasin’ny rugby, ny asabotsy 27 febroary lasa teo. Natao tany Mandraka izany, niarahan’ny tomponandraikitra, tamin’ireo mpanohana sy ireo sekolin’ny rugby (EREV) ao Mahamasina sy ny EDO Ilafy ary ny fikambanana XV Sympathiques eny Malaza. Teo koa ireo mpianatra eny amin’ny Lycée Andoharanofotsy Mandrimena sy ny Club Vintsy Tafaray, […]
Lutte – Afrique 2016 : hanomboka any Egypta rahampitso ny fihaonana
Hisokatra, anio, ao Olympic Club Venue, ao Alexandrie, Egypta ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny taranja tolona «lutte», sokajy «sénior». Anisan’ireo firenena manana solontena miatrika izany i Madagasikara. Raha ny fandaharam-potoana, ny fiofanana ho an’ny mpitsara (Type IV, V), ny hanombohana izany, amin’ity andro voalohany ity. Tsy manana mpitsara miatrika izany, araka ny […]
Par Taratra sur 03/03/2016 En Bref, NS Malagasy
Miray hina sy miara-mientana ny mpanao gazety sy mpanentana fandaharana amin’ny fahitalavitra, any Frantsa any, amin’ny fanentanana ny olona amin’ny ady amin’ny Sida. Manodidina ny 60 izy ireo no nandray anjara tamina rakitsary na « clip », manentana ny tsirairay mba hanome izay foy hiadiana amin’ity areti-mandoza ity. Hiara-handefa io « clip » io ireo karazana fahitalavitra any Frantsa, […]
Groupe N’Art. son : mitory anatin’ny fiderana mihetsiketsika
Par Taratra sur 03/03/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Finamanana nasesiky ny fitiavana sy faharesen-dahatra ny hampiasa talenta hoenti-midera an’Andriamanitra. Antony iray nahateraka ny Groupe N’Art.son, efa-taona lasa izay. Sihanaka, lehibe tany amin’ny faritra avaratra Ranarison Désiré, lehiben’ny Groupe N’Art. son. Tarika mirona amin’ny fitoriana an-kira anatin’ny gadona mihetsika toy ny salegy, malesa, dômbôlô, antosy, baoejy, sns, izay ravahin’ny soradihy mendrika sy kanto. Ankoatra […]
Amitié Fandian : hiverina indray ry Iraimbilanja
Raha toa ka efa miaka-daza ireo mpanakanto tanora eo amin’ny tontolon’ny rock, mbola manana ny toerany ary miverina tsikelikely koa ireo efa andrarezina. Nampamiratra ny tontolon’ny rock iny taona nivalona iny, ary be ny fanantenana amin’ity, raha tarafina amin’ireo hetsika efa nisy sy vao homanina. Taorian’ny fahombiazana hitan’ny tarika Kiaka ny faran’ny herinandro teo, fantatra […]
Distrikan’Ambohidratrimo : havondrona ny vehivavy hahomby amin’ny fitadiavana
Hotanterahina, any amin’ny kaominina Ambatolampy Tsimahafotsy ny fankalazana ny andron’ny vehivavy ho an’ny distrikan’Ambohidratrimo. Hanomboka ny asabotsy izao sahady ny hetsika any an-toerana. Lohahevitra hovoizina ny hoe: “Andeha hanao dingana ho fampimirana lenta ny lahy sy ny vavy”. Tanjona ny hampivondrona ny vehivavy amina fikambanana mba hiara-hiasa ka hahita fahombiazana ary hahaleo tena amin’ny fivelomana. Hizarana […]
Ny jeneraly Ramakavelo Désiré : “Famerenana ny fifampitokisan’ny mpitondra sy ny vahoaka ny fampihavanana”
Par Taratra sur 03/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Ahoana ihany ny amin’ny fampihavanam-pirenena? Maneho ny fijeriny ny mpandalina tantara sady minisitry ny Fiarovam-pirenena teo aloha, ny jeneraly Ramakavelo Désiré: “Tsotra ny hoe fampihavanam-pirenena: famerenana ny fifampitokisana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka entina.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny sy ny fitondrana HVM amin’izao fotoana izao? Jeneraly Ramakavelo Désiré […]
Par Taratra sur 03/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
60 isan’andro eo ho eo ny isan’ny olona voafonja hiatrika fitsarana eny amin’ny tribonaly Anosy, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fonjan’Antanimora, Rakotonandrianina Olivier, ny talata teo. Vokatry ny tsy fisian’ny fiarabe hitaterana ny voafonja, manofa taxi-be 119 ny mpiandraikitra ny fonja ka manao tsipaipaika ny mpiasa sy ny malala-tanana manefa ny vola hofan’ny fiara. 24 000 Ar […]
Tsy ampy antontanisa marina : hisy fanadihadiana momba ny sora-piankohonana
Hatsaraina ny fanoratana ara-panjakana ny zaza teraka sy tsy mbola manana kopia eto amintsika ary ny sora-piankohonana amin’ny ankapobeny ao anatin’ny fandaharanasa afrikanina ho fanafainganana ny fanatsarana ny rafitra fanoratana ny olona ara-panjakana (APAI-CRVS). Efa nanao ezaka ny fanjakana malagasy amin’ny Ezaka kopia ho an’ny ankizy (Eka) nanomboka ny taona 2004. Nahatratra 83% ny tahan’ny […]
PM Ravelonarivo sy ny «Raharaha andramena» : « Tany tan-dalàna isika… »
Hentitra ny Praiminisitra Ravelonarivo manoloana ny resaka andramena. Nambarany fa tsy azo ekena izany ary efa manao ny ezaka rehetra ny fitondrana. « Tsy hanaiky ny trafikan’andramena izany ny fitondrana. Fahavalom-pirenena ireo manao izany ary tany tan-dalàna isika. Tsy manao ary tsy hanao izany izahay ary hanenjika azy ireo hatramin’ny farany », hoy izy teny Mahazoarivo, […]
Fifidianana filoham-pirenena tatsy Kaomoro : tsy nisy fizarana fanomezana ny fampielezan-kevitra
Tsy nisy ny fizarana fanomezana toy ny “tee-shirt“ nandritra ny fampielezan-kevitra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena tatsy Kaomoro. Izay no anisan’ny tatitry ny depiote voafidy tany Antananarivo VI tamin’ny anaran’ny Mapar, Raherisoa Vololona Victorine, teny Tsimbazaza, afakomaly, momba ny fanaraha-maso ny fifidianana fihodinana voalohany, ny 21 febroary lasa teo. Nivoaka avy hatrany ny voka-pifidianana vonjimaika teo anivon’ny […]
Nisongadina tamin’ny filankevitry ny minisitra, omaly, teny Iavoloha ny fandraisana anjarantsika amin’ireo fivoriana iraisam-pirenena. Eo ny hiatrehan’ny minisitry ny Mponina ny fihaonana momba ny vehivavy hatao any New York ny 14 hatramin’ny 24 marsa izao. Ny fihaonana momba ny rano ho an’ny rehetra sy ny fahadiovana, hatao any Addis Abeba ny 15 sy 16 marsa […]
Zaka tsara : ady fiady sady fitady
Tena atao ve ny ady amin’ny kolikoly? Anisan’ny fepetra takin’ireo mpamatsy vola io. Mba hivoaka amin’izay, ohatra, ny raharaha kolikoly teny amin’ny Antenimierampirenena. Tena nisy na misy sa tsia? Amin’izay, azo antoka sy itokisan’ny vahoaka ireo depiote, ny fanjakana foibe, ny Bianco… Tena atao ve ny famonjena sy ny vahaolana maharitra amin’ireo mponina iharan’ny haintany […]
« Précédent 1 … 980 981 982 983 984 … 1 039 Suivant »